Maxaa kala socotaa kobaca shukaansiga xiliga lagu guda jiro bisha ramadaan Aqriso Faallo Qoto dheer | warsugansomaliya.wordpress.com
Maxaa kala socotaa kobaca shukaansiga xiliga lagu guda jiro bisha ramadaan Aqriso Faallo Qoto dheer
Iyadoo lagu kudo jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa kobca ama dardar xoogan ku yimaadaan shukaansiga gaar ahaan shukaansatada ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Shabakada Hiiraannews.net oo sameysay baaritaano dhinacyo badan leh ayaa waxa ay ku ogaatay in bilkasta oo ramadaan marka la gaaro isbadal xoogan uu ku yimaado shukaansiga waxaana dhaq dhaqaaq shukaansi laga dareemaa xiliyada habeenkii ah guud ahaan magaalooyinka iyo tuulooyinka dalkeena Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa koow ka ah meelaha sida buuxda looga dareemo dardarta shukaansiga waxaana shabakada Hiiraannews.net ay la xiriirtay dhalinta Soomaaliyeed qaarkood kuwa dardarta geliyay shukaansiga ama haasaawaha.
Qaarkamida dhalinta aan xiriirka lasameynay oo ku kala sugam Magaalooyinka Muqdisho Baydhabo Marka Baladweyna Gaalkacyo Garoowe Boosaaso Burco Hargeysa iyo meelo kala ayaa inoo sheegay in bisha ramadaan uu shukaansiga aad u macaan yahay xiliyada habeenkii ah oo aan marnaba laga daaleyn.
Dhalinta ayaa sheegtay inay ku tashtaan bisha ramadaan ugu yaraana ay bartaan bishaan 10 qof oo ay la haasaawaan balse kobaca shukaansiga ayaa u kala soocneyn rag iyo dumar waxaana magaalooyina amaankoodu wanaagsan yahay laga dameeraa dhaq dhaqaaqa shukaansi xiliyada habeenka ah.
Sanadan ayaa waxa sidoo kale waxaa shukaansi xoogan xilyada habeenkii ah laga dameemayaa magaalada Nayroobi gaar ahaan xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii Waxaana la sheegaa in bisha ramadaan ay isbartaan malaayiin dhalinyaro ah oo isugu jira rag iyo dumar.
Xaquuqda Warbixintan Waxaa iska leh Hiiraannews.net
WQ/ Mohamud ismail hashi
← War Deg Deg ah kooxo hubeysan oo caawo Degmada B/weyn ku toogtay madaxii gasoorka degmadaasi
QM oo Eedeyn ujeedisay Wasiirka Warfaafinta Somaliya Ciilmooge (DHAGEYSO) →